HPC Series Automatic Hydraulic Cup Kuita Machine - China Guangdong Jinxin Machinery
Available zvinhu PP, Pe, PET, hudyu, GPPS
Kuvakwa Area (mm) 650 × 320 700 × 350 720 × 450 750 × 500
Kuvakwa Depth (mm) 120/180 120/180 120/180 120/180
Kuvakwa Speed ​​(zvinogara / Maminitsi) 20-35 20-35 20-35 20-35
Ukobvu (mm) 0.3-2.0 0.3-2.0 0.3-2.0 0.3-2.0
Simba rose muchina (KW) ≤45 ≤50 ≤55 ≤65
Divi (mm) 5500x2300x2400 5800x2500x2600 6200x2800x2600 7200x2800x2600
Thermoforming kurongedza mudziyo zvakadai makapu, mabhokisi uye nembiya. Akadai mukaka nemikombe, mondo nemikombe, aizikirimu nemikombe, mumwe-kure nemikombe, pakarepo Fried nembiya, mabhokisi zvokudya yokutsanya, mabhokisi zvokudya uye zvichingodaro.
1. muchina adopts hydraulic kumanikidzwa hurongwa kubereka zvigadzirwa, yakadzikama kumhanya, ruzha duku, zvakanaka muforoma nokukiya okufunga.
2. Electromechanical, gasi, hydraulic kumanikidzwa kusangana, PLC kuzvidzora, mukuru nemazvo maitikiro kutendeuka.
3. Zvakakwana kwangoitwa nokutsanya kugadzirwa nokukurumidza. By kugadzwa anoumba siyana kugadzira zvinhu zvakasiyana.
4. Tevedzera kupinza pezvitsiga akakurumbira pakati yemagetsi uye pneumatic Fittings, yakadzikama kumhanya, yakavimbika unhu uye upenyu hurefu.
5. muchina yose tsindirana, mumwe chakuvhuvhu ane mabasa ose, akadai kudzvanya kupa, achiumba, achicheka, kutonhora uye akapedza chigadzirwa ichivhuvhuta. Short muitiro, mukuru unhu apedza zvigadzirwa uzosangana National utsanana mureza.
6. muchina wakafanira hwokubereka PP, Pe, PET, hudyu, GPPS nemamwe mapurasitiki zvigadzirwa, akadai mukombe, bhokisi, ndiro uye zvichingodaro. Somuenzaniso, mukombe mukaka, mondo mukombe, aizikirimu mukombe, mumwe-kure mukombe, pakarepo Fried mbiya, zvokudya bhokisi, zvokudya bhokisi uye zvichingodaro.
Previous: HPC-660 Automatic mondo Cup Cutting uye kuisira Machine
Next: RCX Series Automatic Cam Cup Kuita Machine